गृहजिल्लामा मजदुरहरुसँग श्रम गर्दै विप्लव, सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भिडियोसहित — Sanchar Kendra
कपिलवस्तु । धेरैलाई चाँसो होला, यतिबेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ कहाँ के गर्दै होलान ? धेरैले कल्पना गरेका होलान कि त विप्लव राजनीतिक भेटघाटमा मात्रै व्यस्त होलान ? या संघीय राजधानी काठमाडाैंतिर बसेर अन्य कुनै काममा फोकस गरिरहेका होलान !
तर यतिबेला नेकपा महासचिव विप्लव तपाईले कल्पना गरेको भन्दा फरक काममा व्यस्त छन् । महासचिव विप्लव यतिबेला गृहजिल्ला कपिलवस्तुमा मजदुरहरुसँगै श्रम गर्नमा व्यस्त देखिरहेका छन्। सरकार र नेकपाबीच भएको तीन बुँदे सहमतिपछि निकै व्यस्त विप्लव दोस्रो पटक सार्वजनिक रुपमा कामदारहरुसँग काम गर्दै देखिएका हुन् ।
यसअघि पनि कपिलबस्तु पुगेका विप्लव शिवगढीका स्थानीयको गहुँबारीमा देखिएका थिए। पार्टीका स्थानीय नेता कार्यकर्तालाई साथमा लिएर विप्लव गहुँ काट्न बारीमा गएका थिए ।
विप्लवले कामदारहरुसँग काममा जानु पहिले भने, “श्रमसँग नजोडिएको नेता कार्यकर्ता कम्युनिस्ट बन्न लायक हुँदैन, जनता बारीमा भएकोले बेला हेरेर बस्ने कम्युनिस्ट नेता बन्न सक्दैन ।”
तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनबारे सरकारसँग छलफल, बन्दी नेता कार्यकर्तालाई भेटघाट, राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त विप्लव बेल्चा बोकेर आफ्नो गाउँमा पुगेपछि स्थानीयले खुशी व्यक्त गरेका छन् । उनीहरु भन्छन्,“कम्युनिस्ट नेता यस्तो हुनुपर्छ ।” महासचिव विप्लवले मजदुररुसँग श्रम गर्दै गरेको भिडियो र तस्विर यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । हेर्नुहोस भिडियो